झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुहाेस्, तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुहाेस्, तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु
झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुहाेस्, तपाइले देख्नु भएको यी ५ सपनाहरु
काठमाण्डौ । हामीले सपना त देखेका नै छौँ । हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु भनेको एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्र* भाव पार्ने गर्दछ । तर कति सपनाहरु हामी बि* र्सिने गर्दछौँ भने कतिपय सपनाहरु या द रहन्छन् । सपना देख्नु एउटा स्वस्थ व्यक्तिको आवश्यक प्रक्रिया हो । चे*तन र अवचे*तन अ*वस्थामा जाने आउने दृश्य र अवचे*तन र चे*तन अ* वस्थामा आउने फे* रब दल परदृश्यलाई नै सपनाको वैज्ञानिक परीभाषा मान्न सकिन्छ भने ग* हिरो निन्द्रामा देखिने सपनाले ज्योतिषीय मूल्य मा* न्यता समेत राखेको हुन्छ । ज्योतिषीय शास्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिले देखेको सपनाले पूर्वसूचना शुभ अ*शुभ अनि मिश्रित फल दिने बताइएको छ ।
सपना हाम्रो अ* धिनमा हुँदैन । त्यसैले कहिले हामी सपनामा के देख्छौँ भनेर पनि हामीलाई था* हा नै हुँदैन । त्यस्तै सपनामा देखिएका कुराहरुका अर्थ के हो भन्ने बारेमा जानेका हुँदैनौँ । जन्मकु* ण्डलीको बि* स्तृत अध्यन गरेर सपनाको फ* ल ब* ताउन सकिन्छ । अ* ग्निपु राणमा केहि स त्य त*थ्य लेखेको पाइन्छ । ज्योतिष शा* स्त्रका अनुसार यदि जा* तकको जन्मकु ण्डलीमा नराम्रा ग्र हहरूको अ* सर रहेको छ भने नराम्रा नराम्रा सपना देख्दछन् अनि फल पनि नराम्रो नै भो* ग्दछन् । प्राय मान्छेहरुले निन्द्राबाट बि उझिं*दा आफूले देखेका सपनाहरु बि र्सिने गर्छन। त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको अ* सरबारे थाहा हुँदैन । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको सं* केत गर्ने गर्छ।
प्राय मान्छेहरुले रातको समयमा देखेको सपना बिहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सु* नाउने गर्दछन्। कतिपय सपनाहरु राम्रा हुन्छन् भने कतिपय नराम्रा हुन्छन् । यसरी आफूले देखेका सपना सु* नाउने गर्दा के हुन्छ भनेर प्रायलाई थाहा हुँदैन । हामीले देख्ने हरेक सपनाले केहि न केहि फल दिने गर्दछ । यदि आफूले देखेका यस्ता केही अचम्मलाग्दा तथा अनौठा सपनाहरु निन्द्राबाट बि उँझि ने बितिकै अरुलाई सुनाउदा त्यस सपनाको फ* ल प्रा* प्त नहुन पनि सक्छ । यसका साथै यसले तपाईको जीवनमा पर्ने प्र* भाव पनि घ* ट्दै जा* न्छ। आज हामीले यस्ता केही पाँच वटा सपनाको बारेमा उल्लेख गरेका छौं जुन सपना अन्य व्यक्तिहरुलाई सुनाएको ख* ण्डमा तपाईको जीवनमा यसबाट हुने प्र* भाव क*म हुँदै जा* ने गर्दछ ।
१. आफूलाई मृ त अ वस्थामा देख्नु भएमा: यदि तपाईले निन्द्राको समयमा आफुलाई मृ* त अ* वस्थामा देख्नुभयो भने यो सपना अ* न्यन्त शुभ हुने गर्छ। यस सपनाको अर्थ तपाईका जीवनमा आ* इपरेका हरेक स* मस्याहरुको अ* न्त्य हुँदै जानेछन् भनेर बुझिन्छ। त्यसैले यस्तो सपना देख्नुभएमा कसैलाई पनि सु* नाउनु हुँदैन । २. साँ* प देख्नु भएमा : यदि राती सुतेको समयमा सपनामा साँप देख्नु अ* न्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यदि तपाईलाई साँ* पले ल* खेटेको ,घेरेको वा टो केको देख्नु भएमा यो जान्नुहोस् कि तपाईको जीवनमा ठूलो मान-सम्मान, धन प्राप्त गर्नुका साथै तपाईका हरेक क दम प्रगति उ* न्मुख हुनेछन्। यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा स* र्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँ* डै स* फ*ल*ता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ ।
तपाईले था* लेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुन्छ । त्यसैले यस्तो सपना कसैलाई नभन्नुहोला । ३. हराभरा बगैंचा र रुखमा फल लागेको देखेमा : यदि सपनामा तपाईको घर वरिपरि वा सुन्दर बगैंचा साथै कुनै रुखमा फल लागेको देख्नु भयो भने त्यसलाई निकै शुभ मान्ने गरिन्छ। यस्तो सपना देख्नुको अर्थ तपाईले जीवनमा चाहे जति खुशी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने आउने दिनहरुमा तपाई आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने योग रहने छ। ४. सानो माछा देख्नु भएमा : माछालाई देवताको प्र* तिक पनि मान्ने गरिन्छ। यदि सपनामा तपाइले सानो माछा पकाएको अथवा खाएको देख्नुभयो भने यसको मतलब तपाईलाई जीवनमा आ क स्मिक धन लाभ हुने यो* ग रहेको छ भने यसका साथै सुख प्राप्ति पनि हुने गर्छ।
५, ब* लिरहेको दियोको साथमा भगवान प्र* कट भएको देख्नु : यदि तपाइले सपनामा भगवान देख्नुभयो भने अथवा ब* ले को दि*यो देख्नुभयो भने यो तपाइको लागी धेरै शुभ हुने गर्छ। यसरी सपनामा ब* लिरहेको दियो देख्दा यसले तपाईको जीवनमा नँया-नँया किसिमका अवसरहरु प्रा* प्त हुँदै जाने सं* केत दिन्छ । यसको साथमा तपाइले कुनै देवि देवता प्र* कट भएको देख्नुभयो भने पनि तपाईको जीवनमा निकै ठूलो सफलता मिल्नुको साथै यसले सदैव तपाइको जीवनमा खुशीयाली छा* उन सक्छ। त्यसैले यी सपनाहरु तपाइले कसैलाई नभनेको नै राम्रो हुन्छ । यस्तो सपना अरुलाई भन्दा यसको प्र* भाव क* म हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
आइतबार सूर्यको पूजा गर्दा यो मन्त्र जप्नुहोस्, पूरा हुन्छ मनोकामना
आज ऋषिपञ्चमी, सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाईदै
गरूडपुराण अनुसार जिवनमा यस्ता काम गरे सफल र यस्ता काम गरे मानिस असफल बन्छ